Nvidia na - akwalite ndị ọkwọ ụgbọala Pascal iji dozie nsogbu abalị gbanwere na macOS | Esi m mac
Nvidia na-emelite ndị ọkwọ ụgbọala Pascal iji dozie okwu Mgbanwe Night na macOS
Otu izu mgbe Nvidia weputara ndị ọkwọ ụgbọala Pascal na beta maka macOS, a na-ewepụtakwa beta beta iji dozie nsogbu dị iche iche metụtara ụdị nke mbụ. Na nke a, na mgbakwunye na njehie ndị nkịtị nke ụdị beta mbụ nwere ike inwe, a Mkparịta ụka abalị na-enweghị isi na macOS Sierra 10.12.4, nke edoziri na ụdị a 378.05.05.05f02.
Enwere ọtụtụ mkpesa na nke a na ọdịda adịghị egosipụta otu maka ndị ọrụ niile, mana nsogbu bụ mgbe emegharịrị nhọrọ a ka etinyere na sistemụ arụmọrụ nke Night Shift ugbu a. Na nke a ọ dị ka jisiri ike dozie njehie ma ọ bụ ya mere ha ji enye ndị ọrụ mmelite ị nwere ike ibudata ma ọ bụrụ na ọ pụtaghị kpọmkwem site na njikọ a.
Ndị ọrụ ga-enwe ike ịwụnye kaadị eserese Nvidia na Macs na-enweghị ọtụtụ nsogbu na-ekele ndị ọkwọ ụgbọala ọhụụ ebudatara kpamkpam n'efu. Maka ugbu a, anyị ga-ekwu na nke a bụ ezigbo akụkọ maka ndị ọrụ yana karịsịa maka ndị nọ na ngalaba ọkachamara ndị na-ahụ na ngagharị a na-ekwe nkwa ọdịnihu na-arụ ọrụ na nhazi vidiyo ma ọ bụ ọbụlagodi na ụwa egwuregwu, ọkachasị maka ndị zụrụ Mac Pro.
Mgbe Phil Shiller, dọrọ aka ná ntị na nyochaa na na Apple ha echefughi nso Mac na n'oge na-adịghị anya a ga-enwe ozi ọma na ndị ọrụ ndị a ọkachamara ọzọ na mgbakwunye na iMac dị ike karị n'otu afọ a mmalite nke Pascal ọkwọ ụgbọala na beta abụwo ezigbo ọ joyụ maka ọtụtụ ndị ọrụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » Nvidia na-emelite ndị ọkwọ ụgbọala Pascal iji dozie okwu Mgbanwe Night na macOS
Apple CarPlay enwetawo afọ ojuju nke onye ọrụ 85%